Jared Kushner: Heshiiska Israa’iil iyo Imaaraadka Carabta wuxuu astaan u yahay ‘isbeddel aad u weyn’ | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Jared Kushner: Heshiiska Israa’iil iyo Imaaraadka Carabta wuxuu astaan u yahay ‘isbeddel aad u weyn’
La taliyaha sare ee madaxweyne Trump Jared Kushner, ayaa sheegay heshiiska ay galeen Israa’iil iyo Imaaraadka carabta uu Mareykanka ka dambeeyey inuu yahay isbeddel aad u weyn oo ku yimid Bariga dhexe.
Mr Kushner oo la hadlayey CBS News wuxuu sheegay heshiiskan sida lama filaanka ah Khamiisti loogu dhawaaqay inuu gobolka uu ammaan ka dhigayo.
Wuxuuna heshiiskani nabadeed uu ku tilmaamay inuu yahay midkii seddexaad ee Bariga dhexe ku dhexmaro Israa’iil iyo carabta, waddamada khaliijkana uu ka yahay kii ugu horreeyey.
Israa’iil iyo Iisutagga Imaaraadka Carabta ayaa la filayaa heshiis dhammeystiran iney seddex usbuuc gudahood ku gaaraan, heshiiskaasi oo ay ku soo celinayaan xiriirka labada dhinac u dhaxeeyey, oo ay ka mid yihiin iney labada dhinac safaarado isdhaafsadaan.
Heshiiskan, “waa guul weyn oo u soo hoyatay” madaxweyne Trump taasoo gobolka oo dhan “Rajo wanaagsan ka abuureyso”.
Heshiiska shaaca laga qaaday ayaa imanaya sidded bilood kadiib marki uu madaxweyne Trump uu soo hindisay heshiis nabadeed oo dhex mara Israa’iil iyo Falastiin uu dhexdhexaadiye ka yahay Mr Kushner.
Inkasta oo Israa’iil heshiiskaasi soo dhaweysay haddana falastiiniyiinta ayaa qorshaha Trump ku gacan seydhay iyaga oo sheegay heshiiska inuu yahay mid u xaglinayo Israa’iil iyaga oo joojiyey xiriirki ay la lahaayeen maamulka Trump.
Heshiiskan Falastiiniyiinta muxuu uga dhigan yahay?
Heshiiskan Israa’iil iyo Iisutagga Imaaraadka Carabta wuxuu ka dhex abuurayaa iney labada dal safaarado isdhaafsadan, wuxuu sida oo kale heshiiskan uu jabinayaa qodobbo ay ka mid yihiin waxyaabaha ugu adag ee ay sanado badan ay Falastiin iyo Israa’iil iskumari waayeen oo ah qorshaha Israa’iil ay ku dooneyso iney ku qabsato dhul hor leh oo ka mid ah daanta galbeed ee Falastiin.
Falastiiniyiintu waxay sheegeen tallaabbada noocaasi ah iney halis ku tahay dowladnimadooda inkasta oo ilaa iyo hadda oggolaashihi ugu dambeeyey aan laga helin dhinaca Washington taasoo u muuqato inuu qorshahaasi istaagay.
Qoraalka sawirka,Falastiiniyiinta waxay si kulul u cambaareeyeen heshiiska Israa’iil iyo Iisutagga Imaaradka Carabta ay wada galeen
Maxaa lagu heshiiyay?
Qoraalka sawirka,Benjamin Netanyahu iyo Mohammed Al Nahyan
Heshiisyadan ayaa ah kuwa la xiriira maalgashiga, dalxiiska, duulimaadyo toos ah, ammaanka, isgaarsiinta, tiknoolajiyada, tamarta, caafimaadka, dhaqanka iyo deegaanka.
Waxaa sidoo kale heshiiska mid ah in labada dhinac ay is waydaarsadaan safiirro.
Wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka, Anwar Gargash, ayaa sheegay aqoonsiga ay Imaaraadka aqonsadeen Israa’iil inay ahayd “tallaabo geesinnimo leh “.
Waddamada Baxrain iyo Cummaan ayaa heshiiskaasi soo dhaweeyey, balse dalka sacuudi Carabiya oo saaxib dhow la ah Mareykanka ayaan ka hadal heshiiskaasi.
Maamul Falastiin oo heshiiskaasi ku tilmaamay mid khiyaana ah wuxuu dib ugu yeertay safiirka u fadhiyey Iisutagga Imaaraadka Carabta.
Wasaaradda arrimaha dibadda iiraanna heshiiskaasi waxay ku tilmaantay “mid falastiiniyiinta dhabaraka ka toogatay”, iyada oo Iisutagga Imaaraadka Carabta ku tilmaantay “mid ceebeysan”.
Qoraalka sawirka,Calanka UAE oo lagu harday dhisamaha dowladda hoose ee magaalada Tel Aviv, Israel
Madaxweynaha dalka Turkiga, Rajab Teyib Erdogan ayaa ka hadlay heshiiska taariikhiga ahaa ee ay gaareen dalalka Imaaraatka Carabta iyo Isra’iil.
Erdogan ayaa intaa sii raaciyay “waxaan garab taaganahay shacabka Falastiin, waligeenna ma oggolaanin in Falastiin la burburiyo.”
Jared Kushner: Heshiiska Israa’iil iyo Imaaraadka Carabta wuxuu astaan u yahay ‘isbeddel aad u weyn’ was last modified: August 15th, 2020 by Admin
Muslimiin careysan oo dibed bax dhigay xad gudub lagula kacay Quraanka Kariimka (Sawirro)
Maxkamadda Caalamiga Ah Ee ICJ Oo Hoggaan Cusub Loo Doortay
Dhageyso:-Dhalinyaradii ka soo jeedey Deegaanada KGS ee joogay Magaalada Baran ayaa waxaa loogu darey Mudo 10 maalmood
Dhageyso+Sawiro:-Kulankan ay soo abaabuleen Maamulka Gobolka Degmada, ururada Bulshada rayidka. Waxaana looga soo horjeeday faragalinta Dowladda dhexe ay ku hayso doorashooyinka Koofur Galbeed.
Kulankii Farmaajo, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo xalay u baaqday shuruud lama filaan ah
Hay’adda UNICEF oo war kasoo saartay labo kamid ah shaqaalaheeda oo Muqdisho lagu dilay